Sniper एलाइट 3: सिस्टम आवश्यकताहरु र जारी मिति
कम्प्युटर, कम्प्युटर गेम
कम्प्युटर गेम को क्षेत्र मा हाल अवलोकन खेलाडीहरूलाई पूर्ण-fledged सिम्युलेटर sniper, तिनीहरूले एक राउन्ड मा सबै राख्नु गर्न लामो समय प्रतीक्षा छ, र जो लागि तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ। मान्छे झन् कार्य र ड्राइभ खोज्दै छन्, तिनीहरूले खेल, तीव्र कार्य, त्यसैले सिमुलेटर sniper को बहुमत आवश्यक वा सार्वजनिक को प्रभाव गर्न प्रयोग नगरिएको, वा उत्तरदायी रहने र गतिशील तत्त्वहरू विभिन्न समावेश गर्नुहोस्। Sniper एलाइट - यो सबै भन्दा प्रसिद्ध को यस विधा सम्बन्धित एक श्रृंखला आजको।
स्वाभाविक, त्यहाँ नेट सिमुलेटर र मिश्रण तत्संबंधी, तपाईं माथि र agonizing पर्खाइ उल्लेख छ wherein प्रस्तुत छैन, र तुरुन्तै कार्य। तर मिति यसलाई यति लामो पहिले छैन जारी थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो एकदम स्वीकार्य छ, सिम्युलेटर लागि प्रकाशित Sniper अभिजात वर्ग 3. प्रणाली आवश्यकताहरु भन्दा यो विधा मा सबै भन्दा राम्रो परियोजना अझै स्थापित छैन। तर आफ्नो कम्प्युटर अझै पनि तिनीहरूलाई पूरा गर्दैन भने, तपाईँ या त यो अपग्रेड, वा परियोजना को पहिले संस्करण मा आफ्नो हात प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
तुरुन्तै तपाईं रोचक तथ्य ध्यान गर्नुपर्छ - Sniper एलाइट3सिस्टम आवश्यकताहरु को मामला मा मात्र न्यूनतम संकेत गर्दै - विकासकर्तालाई तिनीहरूलाई दुई समूह विभाजित गर्न कुनै अर्थमा बनाउँछ निर्णय, त्यसैले मात्र तल्लो लाइन बिताए। अर्को धेरै रोचक तथ्य खेल 2014, जब अन्य सबै परियोजनाहरू पूर्ण अप पुरानो अपरेटिङ सिस्टम लागि समर्थन दिनुभएको छ मा जारी भएको थियो भन्ने छ। तर यो खेल को मामला मा, तपाईं पनि यो Windows Vista मा चल्न सक्छ। दुर्भाग्यवश, Windows XP मालिक यस्तो सम्भावना प्राप्त भएको छैन, तर यो एकदम तार्किक छ - रिलीज पहिले नै "एक दर्जन," यो धेरै पैतृक प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ जो खेल, विकास गर्न कुनै अर्थमा बनाउँछ त तयार छ। तदनुसार, तपाईं सञ्चालन प्रणाली को मामला मा एक एकदम व्यापक दायरा, तर Sniper एलाइट3सिस्टम आवश्यकताहरु लागि सबै कम्प्युटर गेम जस्तै, वास्तव मा, यो बिन्दु सीमित छैन।
पहिले, sniper एलाइट3सिस्टम आवश्यकताहरु को मामला मा उल्लेख रूपमा प्रभावशाली छैनन्, त्यसैले तपाईं राम्रो यो खेल मा छैन प्ले सक्छ सबैभन्दा शक्तिशाली कम्प्युटर। gigahertz छैन कम3भन्दा को क्षमता संग मात्र एक दोहरी-कोर प्रोसेसर छ आवश्यकता - यो प्रत्यक्ष पुष्टि। आजको परियोजनाहरूको भन्दा एक छ-कोर, छैन भने, त्यसपछि कम से कम एक ट्रयाक्टर-कोर प्रोसेसर, खेल को मापदण्डहरु छलफल गर्न सकिन्छ एकदम स्वीकार्य आवश्यक भन्ने तथ्यलाई दिइएको। वास्तवमा Sniper एलाइट3रिलीज मिति असर - सिस्टम आवश्यकताहरु मिड-2014 मा बिक्री गयो जो खेल, संग Tally छैन। अन्य महत्वपूर्ण घटक खेल को उच्च गुणस्तरीय प्लेब्याक लागि जिम्मेवार अब राम्रो ध्यान - तर, बाहिर निस्कन मा मिति पछि एक सानो हुनेछ।
अनियमित पहुँच स्मृति
गत वर्ष बाहिर आएको प्रमुख परियोजनाहरु, अधिकांश कम्तीमा चार, वा राम को पनि छ गिगाबाइट माग। निस्सन्देह, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो खेल साथै सकेसम्म काम, तपाईं राम को बस यस्तो स्टक छ, हेरचाह गर्न आवश्यक छ। तर सरकारी डाटा तपाईं मात्र दुई गिगाबाइट छ पनि भने, परियोजना सञ्चालन हुनेछ भनेर संकेत गर्नुभयो। र फेरि, विशेष गरी यस मामला मा Sniper एलाइट3रिलीज मिति बारे असर गर्छ। सिस्टम आवश्यकताहरु (को आधिकारिक वेबसाइट आफ्नो डाटा सही हो भनेर प्रकाशित) 2014 अनुरूप छैन। तर, वास्तवमा भन्ने रहन्छ, त्यसैले हामी मात्र ढिलो कम्प्युटर को पनि मालिक यो सिम्युलेटर sniper रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ खुसी हुन सक्छ।
भिडियो कार्ड को मामला मा सबै फेरि हुनेछ पहिले नै, जो सिद्धान्त मा एक आश्चर्य, यो अपेक्षा छ रूपमा, एक आश्चर्य हुन बन्द। यो खेल छैन धेरै प्रभावशाली भिडियो स्मृति मात्र 256 एमबी, आवश्यक भन्ने तथ्यलाई अघिल्लो सेटिङहरू दिइएको। स्वाभाविक, तपाईं विरोधीहरूले कोणीय आंकडा हुनेछ, यस्तो भिडियो कार्ड मा कि बनावट गुणस्तर उच्चतम छैन लागि तयारी गर्नुपर्छ, र एक उडान बुलेट - एकदम योजनाबद्ध। तर तपाईं परियोजना सञ्चालन र कुनै पनि समस्या बिना यो खेल्न गर्न, त्यस्तो कम कन्फिगरेसन संग सक्षम हुनेछ।
एक पटक कसरी हालै पाँच वर्ष पहिले खेल Sniper अभिजात वर्ग 3. जारी मिति, प्रणाली आवश्यकताहरू खेल लागि थप उपयुक्त प्रकाशित उल्लेख - के क्याच यहाँ? बस राम्रो र अतिव्यापक ग्राफिक्स सेटिङहरू अनुकूलन - वास्तवमा, कुनै hiccups छन्। तपाईं खेल सकेसम्म व्यावहारिक बनाउन सक्नुहुन्छ, र ग्राफिक्स एक बिट कोणीय गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। एक अलि बढी छ भन्दा महिना को रिलीज संग क्रमशः - कुनै पनि मामला मा, वास्तवमा परियोजना स्टोर समतल मा युरोप मा 27 जुन, 2014 को लागि देखा छ। जुलाई 1 - संयुक्त राज्य अमेरिका मा, खेलाडीहरूलाई पछि किन्न सक्षम थिए। त्यसैले यसलाई छ-कोर प्रोसेसर र डबल अंकको स्मृति पृष्ठभूमिमा विरुद्ध यस्तो आवश्यकताहरु हेर्न एकदम अनौठो छ।
"Skyrim" हल Geyrmunda: स्थान वर्णन, खण्डलाई
डुम4खेल सुरु गर्दैन। के गर्ने?
डैना को खरानी: कहाँ प्राप्त गर्न कसरी दस्तक गर्न?
कसरी प्रयोग "Maynkraft" teleport गर्न र
अनुकूलन विन्डोज 10 खेल: विधि र कार्यक्रम
Geyb Nyuell गर्ने हो? सफलताको कथा
बल्फामिक सिरका। व्यञ्जनहरू मध्य युगमा रोकिन्छन्
को phalanx मा घन्टी फेरि फेसनमा छ!
"Noofen": डाक्टर, analogs र प्रयोगको लागि निर्देशन समीक्षा
घरमा स्याउको रस कसरी तयार
पामेला Travers: जीवनी, इतिहास, जीवन, रचनात्मकता र पुस्तकहरू
JSC "चेबोकसारी विद्युत प्लान्ट": इतिहास, विकास, सम्पर्क
काम Rotational विधि - यो के हो? रूस मा एक rotational आधारमा श्रम कोड प्रावधान
स्याउ विद्युत driers कसरी सुक्खामा? के मा तापमान सुकेको स्याउ
आफ्नै हातमा देश मा पानी बनाउने
उत्पादन र पात्रो को मुद्रण
ट्याब्लेटको "Phlebodia 600": समीक्षा, प्रयोग, संरचना र analogues लागि निर्देशन
Yoshkar-ओला को मन्दिर। पवित्र त्रिएकको चर्च